> Resource> Mac> 3 Ụzọ Ime Data Nnapụta Mac Mfe
Mac OS X aghọwo otu n'ime ndị kasị ewu ewu sistem maka ya pụrụ iche integrated teknụzụ, atụmatụ na arụmọrụ. Ọ bụ ezie na Mac usoro na-atụle nke ukwuu siri ike, ọ pụtaghị na data ọnwụ agaghị ekwe omume, na ihe mere na ọ na-gwara na-mgbe ndabere nke dị mkpa data. Anyị nwere ike hapụ data si Mac usoro ruru ka a ọnụ ọgụgụ nke ihe mere na mkpa na-eme data nnapụta maka Mac.
Data Loss Ọnọdụ
Mac igwe malfunction (ezi uche mmebi)
Mgbe Mac mbanye ada, anyị nwere ike ghara inwe ohere nke dị mkpa faịlụ na-abịa gafee iju omume nke gị usoro. Kasị nkịtị mgbaàmà nke a ọjọọ Mac mbanye ndị dị ka ndị:
• File usoro ure
• Disk bụ unreadable
• Ọ dịghị mountable faịlụ usoro; ike mbanye-apụghị ndokwasa
• Njehie mgbe ịnweta ọ bụla olu nke Macintosh HD
• The Macintosh kọmputa reboots na-akpaghị aka
Human na-ezighị ezi na ime ihe (mmadụ njehie)
• Type ma ọ bụ kpachapụrụ ihichapụ bara uru data dị ka Wụk + Hichapụ, na nsị ahịhịa biini
• Format HD enweghị ndabere
• Ndị ọzọ na-ezighị ezi na ime ihe na Mac
Nsogbu ndị ọzọ
• Virus inflection / agha
• atụghị Anya ike odida
Nile n'elu nsogbu nke data ọnwụ bụ ihe ezi uche na-emebi. The mbanye bụ n'ụzọ anụ ahụ na-emebibeghị, ma anyị nwere ike ịnweta data, ngwa, na ọbụna sistemụ echekwara na ya.
3 Ụzọ maka Data Nnapụta Mac
Dị ka ihe e kwuru n'elu, anyị nwere ike hapụ anyị bara uru data si Mac OS X ruru ka ndị dịgasị iche. Ihe ngwọta kwesịrị iche iche dabeere na-akpata ya. Iji mee data nnapụta Mac, ihe anyị kwesịrị ime mbụ chọpụta isi ihe na-akpata data ọnwụ. Ime data nnapụta (Mac) na-ezighị ezi ngwọta nwere ike ime ka ọnọdụ njọ.
N'ihi na data ọnwụ ruru Mac igwe malfunction, anyị nwere ike na-agbalị anapụta data maka Mac na enyemaka nke 'Disk Utility', ihe inbuilt ịba uru nke Mac OS X sistemụ na-nwere ike ịlele ike n'ezi na-anọgidesi nke Macintosh HD.
N'ihi na ụmụ mmadụ njehie, anyị nwere ike ime data nnapụta Mac na Time Machine. Oge Machine mgbe niile na-eme ka ndabere anyị data awa ọ bụla. Ozugbo anyị nwụrụ data, dị nnọọ tinye Time Machine nchọgharị, na anyị nwere ike naghachi gị Mac faịlụ site na Time Machine ndabere.
Ọ bụrụ na Disk Utility na Time Machine apụghị ime data nnapụta Mac maka anyị, anyị nwere ike mkpa-eji nke atọ party- Mac data mgbake software iji napụta Mac data. Wondershare Data Recovery for Mac Enye irè data nnapụta Mac maka niile n'elu data ọnwụ nsogbu. Ọ nwere ike na-anapụta Mac data furu efu ruru ka ihichapụ, formatting, virus agha, faịlụ usoro nrụrụ aka, na-atụghị anya ike odida na ndị ọzọ na ezi uche emebi.
7 Ụzọ idozi gị flash mbanye mgbe it`s bụghị ghọtara site Windows / Mac